Sirdoonka reer Yurub oo cabsi ka qaba Al-Qacidada Afrika in ay weeraro geystaan xiliga Chirismaska – Radio Daljir
Sirdoonka reer Yurub oo cabsi ka qaba Al-Qacidada Afrika in ay weeraro geystaan xiliga Chirismaska
Diseembar 25, 2013 1:40 b 0
Lagos, December 25, 2013 – Hay?adaha sirdoonka ee dalalka Yurub ayaa cabsi way ka qaba ururada Argagixisada loo aqoonsaday ee ka dhisan qaarada Afrika, inta lagu jiro maalmaha Chrismiska oo loo dabaal-degayo horaanta sanadka.
Hay?adda Sirdoonka ee dalka Nederland ayaa muujisay cabsi wayn oo ay ka qabto ururrada Boko Haram iyo Al-shabaab ee ka dhisan dalalka Nigeria iyo Soomaaliya.
Dalxiisayaasha u dhashay dalalka Yurub ee iyo Maraykanka ee ku sugan Afrika ayaa loo baqayaa, sidoo kale dadka ka soo noqda Afrika xiliga Crismiska ayaa dalalkaas ay cabsi wayn ka qabaan.
Afar sano ka hor ayaa waxaa fashilmay isku day qarax oo lagu fulin lahaa diyaarad ka tagtay magaalada Detroit ee dalka Maraykanka xiligaas oo lagu jiray maalinta ciida Chrismis-ka, weerarkaas waxaa fulin lahaa Cumar Faaruq Cabdimudalib oo lala xiriirinayo Al-Qaacidada gacanka cadmeed.
Boko Haram oo ka dhisan Nigeria, Islamig Maqrib iyo Al-shabaabka Soomaaliya ayaa aad looga baqayaa, kooxda Boko ee Nigeria ayaase loo badinayaa inay fulin karaan weerarada ugu badan ee Argagixiso ee la fuliyo xiligan ciida.